Hlunga abakhiqizi bezindlu nabahlinzeki - China Hlunga izindlu zezindlu
Ukuhlangabezana nezidingo ze-GMP entsha, ngakho-ke i-R & D nokuklanywa kwe-NEH series jacket uhlobo lwe-heater electronic, insimbi yakhiwa ngokusebenza okuphezulu kokuhlanganiswa kokushisa nezinto zokulawula iyunithi. Isetshenziswe kabanzi kwi-biotechnology, imboni yezemithi neye-elekthronikhi, izuze izinzuzo ezinhle zenhlalo nezomnotho.
Uchungechunge lwe-TS lwezihlungi zensimbi engagqwali ziwela emotweni engaguquki neyincane. Ukuhlunga izindlu kunokuvuleka okuphezulu nangaphansi nokuvuleka kwesobunxele nangakwesokudla izinhlobo ezimbili. Ama-cartridges asebenzisa isihlungi se-titanium sintered, izixhumi ezivamile zinezikulufo ezingama-226 nezikulufo ze-M20, imininingwane ekhethekile ingakwazi ngokuya ngezidingo zamakhasimende ukuklama nokwenza ngezifiso.